Maxay Siyaasiyiinta Soomaalida Uga Dhigan Tahay » Axadle Wararka Maanta
Muqdisho (Axadle) – Siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ah musharax u taagan xilka madaxweynimo ee Soomaaliya ayaa go’aan cajiib ah oo ku dayasho mudan ku tilmaamay is-casilaada Wasiirkii Arrimaha Haweenka Ethiopia, Filsan Cabdullaahi Axmed.
Cabdiraxmaan ayaa sheegay in is-casilaada Filsan ay ka dhigan tahay in xilka uu qofku hayo ay ka muhiimsan tahay mabda’a iyo damiirkiisa dadnimo, taasi oo ugub ku ah Soomaalida, sida uu sheegay.
“Filsan C/laahi waxay iska casishay xilka wasiirka haweenka, dhallinyarada iyo dhallaanka Itoobiya. Waxay sabbab uga dhigtay in ay is diideen xaaladda laga doonayo in ay ku shaqeyso iyo mabda’a ay aaminsantahay, qiyamkeeda iyo damiirkeeda dadnimo. Waa arrin ugub ku ah dhaqan siyaasadeedka qowmiyadda Soomaaliyeed,” ayuu ku yiri qoraal uu ku baahiyey bartiisa Facebook.
Sidoo kale waxa uu sheegay inay tusaale wanaagsan u noqoneyso Jiilka Soomaaliyeed, si ay uga hortagaan cadowga ugu weyn ee siyaasadda, midaasi oo mas’uulka oo ka dhigta mid keliya ilaashada xilkiisa.
“Waxay tusaale u tahay jiilka Soomaaliyeed ee laga doonayo in ay jebiyaan cadawga ugu wayn ee siyaasadda Soomaalidu leedahay oo ah siyaasad ka maran mabda’a iyo mowqif sugan, qiyam iyo akhlaaq. Siyaasadda muufaysiga, maxaa iigu jira iyo macaashka maalinlaha ah.”
Filsan ayaa aheyd sarkaalkii u horreeyey ee heer federal ah ee kashifa in uu kufsi ka dhacay gobolka Tigray xilligii uu dagaalku ka socday, waxayna is-casilaadeeda ku sheegtay sababo shaqsi ah oo aad ugu weyn damiirkeeda.